Ayizizo zonke iingcali ze-SEO ezidalwe zalingana | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 8, 2010 NgoLwesine, Septemba 17, 2015 Douglas Karr
Ngelixa ndandise Isihlomelo, Bendihlala ndijongana neengcali ze-SEO ezithanda ukucela umngeni kuyo yonke into encinci kwisicelo. Umcimbi yayikukuba aba bantu babesetyenziselwa ukusebenza kwinani elisetiweyo lamaphepha ngamagama aphambili kwaye emva koko bandise ifuthe lala maphepha akhethiweyo. Babengasetyenziselwa ukusebenzisa iqonga apho banokujolisa khona kumakhulu emigaqo kwaye babhale inani elingenamda lomxholo olungileyo ukwakha iziphumo.
Ayizizo zonke iingcali ze-SEO ezenziwe ngokulinganayo. Ndingazihlela njengo I-SEO jack yayo yonke imisebenzi. Ngombulelo, ndizungeze nabanye abaqeqeshi be-SEO abasebenze kwimiceli mngeni eyahlukeneyo kubaxumi. Ndihlala ndifunda kubo.
Andinkqonkqozi kuyo nayiphi na ingcali ye-SEO- kodwa kukho imiceli mngeni abajamelana nayo nabaxhasi abaninzi abafuna ubuchwephesha:
Khu phiswano -Iziza zihlala ziindawo eziphakamileyo zedola kwaye zimpompa imali eninzi kumxholo kunye neenkonzo zokunceda ukugcina i-backlinks eyomeleleyo kwindawo kunye nokwandisa iphepha ngalinye elinazo zonke iindlela zokwenza ubuchule.
weNgingqi -Ukunyusa indawo yakho ye-SEO yengingqi kufuna ubuchule obahlukeneyo, kubandakanya amagama engingqi, kunye nokwakha indawo, amakhonkco afanelekileyo. Umxholo kufuneka ujolise kuyo yonke!
KuBanzi -Ukwakha kunye nokwenza indawo yakho ibe noluhlu olubanzi lwamagama aphambili, ngamanye amaxesha amawaka, angathatha izakhiwo ezizodwa zesiza ukwandisa ifuthe lomxholo kwindawo leyo.
blog - iibhloko zezilwanyana ezahlukileyo kunokusebenzisa iiwebhusayithi. Ubuchule obusetyenzisiweyo ukupapasha nokusasaza umxholo, ukubhala ikopi enyanzelisayo ukutsala umdla, kunye nokudibanisa isitshixo semidiya yoluntu. Ukwakha kwiqonga elisebenzisa ngokupheleleyo izixhobo ezinje nge-pinging, i-sitemaps, idatha ye-meta, kunye nemixholo ephuculwe kakhulu sisiseko ekufuneka usibandakanyile. Awunyanzelwanga linani lamaphepha.
New Ukutyhala idomain entsha ngaphandle kwegunya kufuna isicwangciso esahlukileyo kunesokusebenza nesiza esele sinetoni yegunya kunye nenqanaba kakuhle.
IiMicro-Sites kunye nokufika kwamaphepha -Ukwakha iisayithi ezifihlakeleyo ezinephepha okanye amabini ukujolisa kutrafikhi ethe ngqo kunye nomxholo we-tuli kufuna kakhulu, ulawulo oluqinileyo lokuhanjiswa kwegama kunye nokwakhiwa kwephepha.
Igunya eliphezulu -Abanye abaqeqeshi be-SEO abangakhange basebenze nemimandla esekwe ngokuma okuhle bathathe umngcipheko ngokungeyomfuneko. Abanye abantu be-SEO bayathanda ukucofa kunye nokuze babhukuqe de bayophule into esebenzayo. Ayilunganga xa unerekhodi ethembekileyo yomkhondo. Ngamanye amaxesha ukucoca kungathatha iinyanga ukunyuka ubuye umva.
Ixesha elilungile -Izinto ezininzi zobuchwephesha kunye nabantu abadumileyo zifuna ulwazi ngendlela yokusithatha isihloko esithandwayo kwaye usiguqule sibe ziitoni zezithuthi ngaphakathi kwemizuzu okanye iiyure usebenzisa i-SEO ngokufanelekileyo. Aba bafana bayamangalisa… kuhlala kunomdla ukubona ukuba ngubani obeka inqanaba # 1 xa kusaphuka iindaba.
Iifama - umxholo zolimo iqala ukuthatha indawo njengoko iindleko kunye ne-bandwidth yehle kakhulu. Ukuba ndingabeka indawo esebenzayo eyongeza amanqaku angama-500 ngosuku kwaye afumane la maphepha alathisiweyo, ndinokuphosa ezinye iintengiso kuwo kwaye ndizuze kakhulu. Ngokukodwa ukuba ndijolisa kumaphepha kumagama aphambili aqhuba amaxabiso aphezulu okucofa kunye nemilinganiselo ephezulu yokukhangela.
Njengoko uthenga i-SEO yakho yobuchwephesha elandelayo, ulumkele ubungakanani babaxumi abakhe basebenza nabo, izicwangciso ekufuneka bezithumele, ngakumbi iziphumo abaziphumezileyo. Kubonakala ngathi yonke iarhente ngaphandle ngoku yongeza i-SEO kuluhlu lweenkonzo… lumka.
Buza izikhombisi, jonga iingcali ezikwi-Intanethi ukubona ukuba zikhona ngokoqobo isikhundla, kwaye ungothuki xa iikowuti zibuyela kuyo yonke imephu. Uncedo olukhulu lwe-SEO kufanelekile kutyalo-mali kwaye lunokubiza kakhulu. I-SEO engalunganga yimali emoshakeleyo.
tags: kwimihlaba ifamayendawo seoidilesi entshainqanaba ngegama eliphambiliIxesha elilungileigunya lokukhangelaSEOukhuphiswanoUmcebisi we seoiingcali ze seo
Jan 8, 2010 kwi-7: 48 AM
Kwakukho ixesha laxa "uJack wazo zonke iiTrades" kwidomeyini yakhe yayiyinto elungileyo. Akukho munwe ukhomba ukuba kutheni umsebenzi wakho ungasebenzi ngenxa yento omnye umntu ebefanele ukuyenza. Ndisacinga ukuba kunjalo kwaye ndihlala ndibizwa ngokuba yi-generalist kwaye ndilungile kule nto. Bahlala betshintsha uluvo lwabo xa besebenzisa iinkonzo zam ;-).
Amanqaku akho athathwe kakuhle kwaye ndiyathemba ukuba abo baphaya bafuna "iingcali" ze-SEO, njengazo naziphi na ezinye iingcali ozifunayo, baqonde amanqaku owenzayo apha ngasentla ukuze bakwazi ukuqinisekisa kunye nokuqinisekisa inqanaba "lobuchwephesha" abalifunayo okanye abalifunayo.
Nyakhomtsha kwaye ugcine umxholo omkhulu uza! Ndiyonwabele isiginali yakho kumyinge wengxolo 😉